Semalt बाट ईमेल Hoax वा फिशिंग घोटाला सामना गर्न मार्गनिर्देशन
ईमेल घोटालाहरू प्राप्तकर्ताहरू र पीडितहरूबाट पैसा चोरी र इन्फर्मेसनको उद्देश्य हो। ईमेल घोटालाहरू, जसलाई फिसि। फ्रडको रूपमा पनि चिनिन्छ जालझेल बढ्दैछ किनकि जालसाजीहरूले बैंक विवरणहरू र पीडितहरूको व्यक्तिगत जानकारी चोर्नको नयाँ चालहरू आविष्कार गर्छन्। अन्य केसहरूमा, ईमेल सन्देशहरूमा मालिसियस सफ्टवेयर एट्याचमेन्टहरू हुन्छन् जसले मोबाइल, कम्प्युटर वा भाइरसको साथ ट्याब्लेट संक्रमित गर्न सक्दछ।
यस सन्दर्भमा, Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक ओलिभर किंगले कसरी फिसि scam घोटाला रोक्न महत्वपूर्ण सुझावहरू हाइलाइट गर्दछ।
सबैभन्दा पहिले, ईमेलको ठेगाना जाँच गर्नुहोस्। यो ठगको लागि ईमेल मूल ठेगाना जाँच गर्न लायक छ। प्रायजसो, धोखाधडीहरूले ठेगानाको नाम परिवर्तन गर्छन् जस्तै यो एक कानूनी संगठन वा कम्पनी द्वारा पठाईन्छ। एउटा ईमेल होक्समा प्राय: विचित्र ठेगाना हुन्छ जुन प्राप्तकर्ताहरूले वास्तविक प्रेषकको नामको रूपमा देख्दछन्। स्थापना गर्न यदि एक ईमेल घोटाला हो भने, कम्प्युटर माउस को दायाँ क्लिक गर्न को लागी वा कर्सर प्रेषकको नाम माथि होभर गर्नुहोस् जहाँ ईमेल ठेगाना देख्न सकिन्छ।
दोस्रो , अभिवादन अभिव्यक्ति छ कि भनेर निर्धारण गर्नुहोस्। इन्टर्नेट विज्ञका अनुसार धोखाधडी गर्नेहरूले ईमेल पाठको पहिलो लाइनमा प्रापकको नाम समावेश गर्दछ। यद्यपि सबै स्क्यामरहरू यस चाल प्रयोग गर्दैनन्। कुनै समय, धोखाधडी ईमेलहरूले "हाई" भन्दछ र एक प्राप्तकर्ताको ईमेल ठेगाना समावेश गर्दछ, र अन्य परिस्थितिहरूमा, ठगीले पीडितको नाम समावेश गर्दछ। ईमेल प्राप्तकर्ताहरूलाई सतर्क गराईन्छ कि यस्तो अव्यवसायिक सम्पर्क दृष्टिकोण एक घोटालाको संकेत हो।
तेस्रो , सम्पर्क मिति र जानकारी जाँच गर्नुहोस्। स्थापना गर्नुहोस् यदि तल "हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्" विवरणहरूको वेबसाइटमा कुनै लिंक छ भने। के लिंक गरिएको साइट वास्तविक छ? यो क्लिक गर्न सकिन्छ? यदि उत्तर होईन भने, सतर्क हुनुहोस्। कुनै साइटमा लिंक नभएको ठाउँमा लिंक गर्न जाँच गर्न, कर्सरलाई लिंकमा होभर गर्नुहोस्। वेबसाइटसँग लिंक गरिएको वेब ठेगाना तल बायाँ कुनामा अवस्थित हुनेछ। थप रूपमा, प्रतिलिपि अधिकार मिति अप मिति छ भने स्थापना गर्नुहोस्। स्क्यामरहरू सामान्यतया यो महत्वपूर्ण विवरण बिर्सन्छन्।
ईमेल ब्रान्डिंग घोटाला निर्धारण गर्न पनि सहयोगी छ। प्रायः स्क्याम ईमेलहरू प्रतिष्ठित र ठूला कम्पनीहरू, सम्झौता साइटहरू, खुद्रा विक्रेताहरू, विश्वस्त सरकारी विभागहरू वा सुपरमार्केटबाट हुने बहाना गर्दछ। यसैले ब्रान्डि checking जाँच गरी ब्रान्डित लोगो वा उत्पादनहरूको गुणवत्ता जाँच्न कडाई स indicate्केत गर्न सक्दछ यदि एक ईमेल ठगी हो। के ईमेल ब्रान्डि similar समान छ जुन सरकार वा कम्पनी साइटमा फेला पार्न सकिन्छ? के यसले संगठनबाट कुनै वास्तविक ईमेल मेल खान्छ? यदि उत्तर होईन भने, प्राप्तकर्ता घोटालामा नपर्नको लागि उत्सुक हुनुपर्छ।
के ईमेलले बैंक विवरण वा व्यक्तिगत जानकारी अनुरोध गर्दैछ? यदि एक ईमेलले एक प्राप्तकर्तालाई व्यक्तिगत जानकारी वा बैंक विवरणहरू पठाउन वा अपडेट गर्न सोधेको छ भने, यो प्रायः धोखाधडी हुन सक्छ। व्यक्तिगत डेटामा राष्ट्रीय बीमा नम्बर, पिन कोड, क्रेडिट कार्ड सुरक्षा पिन, डेबिट कार्ड नम्बर वा सुरक्षा विवरणहरू प्राप्तकर्ताले साइटको लागि साइन अप गर्न प्रयोग गर्दछ। धेरै जसो कम्पनीहरूले ग्राहकलाई ईमेल मार्फत व्यक्तिगत जानकारी पठाउन आवश्यक हुँदैन।
अन्तमा, खराब हिज्जे, प्रस्तुतीकरण, र व्याकरण स्क्याम ईमेलहरूको सही संकेतहरू हुन्। अक्सर, स्केमरहरू फन्ट आकारहरू, शैलीहरू र ब्रान्ड लोगोको बेमेलमा प्रयोगमा स्थिरताको कमी हुन्छन्। यी संकेतहरू सुरक्षित रहनको लागि जाँच गर्नुहोस्।